Intuu jir yahay wadnuhu, wadadu intee leegtahay. Hadafka: inaad ka weynaato kana xoog weynaato warshadaha korontada ee heer qaran iyo heer caalami, si aad marwalba u hagaajiso tayada nolosha dadka. Qiimayaasha: u hoggaansamida lagu kalsoonaan karo, u doodidda isbeddelka. Falsafadda ganacsiga: Intee jir tahay qalbigu, intee le'eg tahay wadada. Ku ...
Aqoonta wax soo saarka
Muxuu yahay xasiliyaha danabku: Xasiliyaha danabku waa qalab ku shaqeeya injineernimada korontada oo loogu talagalay inuu si otomaatig ah u ilaaliyo danab joogto ah. Jaangooyuhu wuxuu noqon karaa qaab fudud "quudinta" ama wuxuu ku jiri karaa wareegga xakamaynta jawaab celinta xun. Howlsocodsiinta koontaroolka mootada ama xakamaynta gudbinta ee ...
Iyada oo ay soo ifbaxday wareeg cusub oo koboc maalgashi ah
Markay soo ifbaxdo wareeg cusub oo kororka maalgashiga korontada, soo gudbinta awoodda iyo qalabka is-beddelka waxay soo saaridoonaan awood buuxda sannadaha soo socda, iyagoo muujinaya koror xagga wax soo saarka iyo iibinta iyo xaalad aad u barwaaqo badan. Maaddaama ay tahay laan muhiim u ah gudbinta korantada iyo ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Talooyin - Alaabada Featured - Khariidadda bogga - Goob Mobilka Xasilinta danab ee kordhiyaha, Xasiliyaha danab 5000va, Xasilinta danab ee Guri dhan, Xasiliyaha Dijital Dijitaalka ah ee loogu talagalay Ac, 2kva Xasilinta Danab, 4kva Xasilinta Danab, Dhammaan Alaabooyinka